Industrial Inkunkuma Continuous Plastic Pyrolysis Prodcution Line - China NIutech Environment
Industrial Inkunkuma Continuous Plastic Pyrolysis Prodcution Line
Industrial Continuous Waste Plastic Pyrolysis Plant Process Production
Le iiplastiki zenkunkuma mixed ziya elinqunqiweyo ngokushiyanayo kwaye gqolo kufakwa kwi-reactor pyrolysis nge kumatshini ukutya. Ezi zibonelelo ziya pre-shushu ngexesha lenkqubo lokuhambisa kunye ukunyibilika eliphantsi indawo iplastiki efana PVC ziya pyrolyst. I-HCl iya koko bangabi baphathwe emva ukwahlukana kunye nezinye izinto.
Le izinto rhoqo Inkqubo lobushushu ubushushu bubushushu ukuya reactor pyrolysis. Okubonakalayo rhoqo kufakwa kwi-reactor pyrolysis kwaye spreaded yi inkqubo, ukugqiba pyrolysis asabela kunye iza eliphezulu-kakuhle.
Irhasi oyile pyrolyst ijikwe ibe oil amafutha umgangatho ophezulu kunye nemali encinci igesi emva nkqubo zilandelayo ezifana yokuzahlula iqhezu neyanamhlanje, ibhedi esisigxina catalyzing igesi ezizisekondari de-beseNkosini, njl
Irhasi enokutsha isetyenziswa ngokupheleleyo njengoko amafutha inkqubo emva neesepha, leyo ifumana amandla obushushu self-axhasayo. Igesi emva kokuba elinyukayo abakufanelekeleyo alahlwa emva kwenkqubo ngokuhlanjululwa igesi.
Imali encinane ezintsalela eqinileyo mayivele indlela lusoloko akhutshelwe ngaphandle reactor, kwaye nokuba ngakumbi ukuqhubekekiswa zibe ntonga amafutha.
Industrial Continuous Waste Plastic Pyrolysis Plant inkqubo
inkqubo iplastiki lweNkunkuma pre-unyango (ozikhethelayo)
impahla eluhlaza inkqubo pre-zivula
HCl inkqubo ebangel (ozikhethelayo kuxhomekeke material)
inkqubo yonyango lentsalela, ziyihlambele-free (ozikhethelayo)
Industrial Continuous lweNkunkuma Plastic Pyrolysis Plant Iimpawu
zokufudumeza ezichanekileyo rhoqo nobushushu speading teachnology ifezekiswe.
Inkqubo izinto onabileyo yenza umbandela eshushu ngokulinganayo kwaye kude kwandisa ubushushu umphezulu, accompanish kunye nesakhiwo wechiza, ukuba ngokupheleleyo isonjululwe ukusebenza transfer ubushushu eliphantsi coking ezenzeka kwezinye ubugcisa kunye Equipments ehlabathini.
Irhasi encinane ezinokutsha isetyenziswa ngokupheleleyo njengoko amafutha inkqubo emva neesepha, idibene nenkqubo eyintsalela ubushushu ri, kude kunciphisa iindleko ukubaleka.
I HCL Inkqubo ezizodwa nolupheleleyo ingqondo, ukunciphisa ngokupheleleyo eninzi ukuhlela iindleko yeplastiki inkunkuma umxube.
Amukela enezigaba ezibini catalyzing nobuchwepheshe, nto leyo ifumana ioli ephezulu isivuno kwakunye nomgangatho ongcono.
Inkqubo zokuhlanjululwa igesi ethile ziya kususa onke engcolisa, ezifana khompawundi organic kunye amasuntswana eqinileyo efana H2S, CO, CO2, SO2, SO3, Nox, NH3 njl, ezenza iinkcukacha ukukhutshwa athobele eYurophu US njl kakhulu kulawulwa imigangatho lizwe.
yonke Umgca isebenzisa inkqubo yolawulo acwangciswe PLC, akwazi ukubona zonke iindawo ulawulo esizenzekelayo ukuqokelela, ukubala, ingxelo uze uprinte idatha alarm ngokunjalo.
Previous: Latest oil plant pyrolysis amafutha tire technology lweNkunkuma oluqhubekayo kunye CE / TUV / SGS
lweNkunkuma Plastic Pyrolysis Plant
Industrial Continuous zeplastiki lweNkunkuma noKwenziwa ngokutsha kwezinto ebesezisetyenzisiwe & ...
Waste Plastic Pyrolysis Machine kunye Qhubeka ngokupheleleyo ...
Waste Plastic Pyrolysis Plant Best High-Quanli ...
Waste Continuous Industrial Plastic Pyrolysis P ...
Waste Plastic Pyrolysis ukuya Oil Machine nge CE ...
Industrial Continuous Plastic lweNkunkuma ukuba yokuTyibilika ...